အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လဲ အကြော်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကို မစွန့်လွှတ်ပဲ ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူ လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ သားငယ် – Suehninsi
မြန်မာအိုင်ဒေါ Season2သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ အဆိုတော် သားငယ်ကတော့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး Winner ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ဝန်းရံအားပေးမှုကို အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ သားငယ်က
အခုဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ဘဝကို ရရှိထားပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ သားငယ်က အသံကောင်းသလို အရည်အချင်းလည်းရှိတာကြောင့် ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အရင်က ချစ်ဇနီးချောလေးနဲ့အတူ အကြော်ရောင်းခဲ့တဲ့ သားငယ်က အခုလို
အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးကို တန်ဖိုးထားကာ လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သားငယ်တို့ဇနီးမောင်နှံက အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းမောင်တစ်ထမ်းမောင်တစ်ရွက် ဆောင်ရွက်တတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကပါ သဘောကျနေရတာ
ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း သားငယ်က ချစ်ဇနီးနဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သားငယ်က “ပဲစိမ့်ကြော် ရောင်းမယ်ဟေ့ !Live လွှင့်ပြီးရောင်းရမလား ! Delivery နဲ့ ပို့ရမလား ” ဆိုပြီး အကြော်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးတွေကို
တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပကာသနတွေကင်းတဲ့ သားငယ်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဘဝလေးကတော့ အရမ်းကိုအေးချမ်းပြီး ပျော်စရာကောင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အဆိုတော်သားငယ်တို့စုံတွဲရဲ့ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
မွနျမာအိုငျဒေါ Season2သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးမှာ အဆိုတျော သားငယျကတော့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး Winner ဆုကွီးကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ဆှတျခူးရရှိခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ ။ ပွိုငျပှဲကာလတဈလြှောကျလုံးမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ဝနျးရံအားပေးမှုကို အမြားဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ သားငယျက
အခုဆိုရငျ အောငျမွငျတဲ့ဘဝကို ရရှိထားပွီ ဖွဈပါတယျ ။ သားငယျက အသံကောငျးသလို အရညျအခငျြးလညျးရှိတာကွောငျ့ ဂီတလမျးကွောငျးပျေါမှာ ဆကျလကျလြှောကျလှမျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ အရငျက ခဈြဇနီးခြောလေးနဲ့အတူ အကွျောရောငျးခဲ့တဲ့ သားငယျက အခုလို
အောငျမွငျနတေဲ့အခြိနျမှာတောငျ သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးလေးကို တနျဖိုးထားကာ လုပျကိုငျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ ။ သားငယျတို့ဇနီးမောငျနှံက အလုပျလုပျတဲ့နရောမှာလညျးမောငျတဈထမျးမောငျတဈရှကျ ဆောငျရှကျတတျတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေပါ သဘောကနြရေတာ
ဖွဈပါတယျ ။ အခုလညျး သားငယျက ခဈြဇနီးနဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝထေားတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ သားငယျက “ပဲစိမျ့ကွျော ရောငျးမယျဟေ့ !Live လှငျ့ပွီးရောငျးရမလား ! Delivery နဲ့ ပို့ရမလား ” ဆိုပွီး အကွျောရောငျးတဲ့လုပျငနျးမှာ ပြျောရှငျနတေဲ့ပုံလေးတှကေို
တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ ပကာသနတှကေငျးတဲ့ သားငယျတို့ဇနီးမောငျနှံရဲ့ဘဝလေးကတော့ အရမျးကိုအေးခမျြးပွီး ပြျောစရာကောငျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ အဆိုတျောသားငယျတို့စုံတှဲရဲ့ပုံလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
Source : Thar Nge’s Facebook
ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လက်ထပ်ခွင့်လာတောင်းခဲ့တာကြောင့် နဲနဲတော့တင်းတယ်ဆိုတဲ့ ရဲတိုက်
အမေဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့မှာ (၅၀၀၀)တန် အပြည့်ပါတဲ့ ပန်းစည်းကြီးနဲ့ မွေးနေ့ကိတ်လှလှလေး ပြင်ဆင်ပြီး စပရိုက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ထူးခြား
မတရားမှုတွေကြားမှာ စိတ်ဓာတ်တွေလဲကျနေပြီလို့ ယနေ့ရုံးချိန်းမှာ ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ မင်းရာဇာ